🥇 ▷ Sony PS4 waxay heshaa aruurinta cusub ee DualShock 4 kontaroolayaasha ✅
Sony PS4 waxay heshaa aruurinta cusub ee DualShock 4 kontaroolayaasha
Sony waxay dib u cusbooneysiineysaa “fiirin” amarradaada ama kontaroolayaasha kontoroolka PS4. In kasta oo ay kooxda reer Japan horeba u leedahay xulasho balaaran oo midabyo ah kuna dhammeystiran DualShock 4, maanta waxay ku dhawaaqday ururinta cusub. Isku darka midabada cusub, oo wadarta afar, ay gaari doonaan macaamiisha deyrtan.
Intaa waxaa dheer, waxaan sidoo kale leenahay madax madaxeed cusub oo dahab ah si aan u dhameystirno xulashooyinka kala duwan.
Qorshayaasha midabka cusub waxaa ka mid ah buluug macdan ah, casaan qafiican, casaan dahab ah iyo guduud koronto. Sidaa darteed, waxaa jira afar ikhtiyaar oo cusub oo ay heli karaan macaamiisha si ay ugu buuxiyaan qalabkooda PS4.
4 ikhtiyaar oo cusub oo loogu talagalay PS4 DualShock 4 xakameeyayaasha
Midba midka kale, kaaliyayaasha oo dhan waxay leeyihiin qorshe midab oo siman. Si kastaba ha noqotee, waxaan haynaa mowduuca camo-gaduud cas oo ka soo horjeedda codadka pastel ee kuwa kale. Sidoo kale la soco isticmaalka iftiiminta qaybo gaar ah oo amarrada ah.
Sheegitaan kale waa midabka badhamada. Taasi waa, halkii laga raadin lahaa wareegga casaanka, saddexagalka cagaaran, laba jibbaarka guduudka iyo iskutallaabta buluugga ah, midka jilicsan ayaa ka sarreeya afarta qorshe ee midabaynta cusub. Wax aan arki karno markaa:
Xulashada midabbo cusub ayaa imaan doona bisha Sebtembar, qiime ku kacaya $ 5 marka loo eego noocyadii caadiga ahaa. Sidaa darteed, waxaan leenahay qiimayaal qiyaastii ah 65 euro, haddii beddelka tooska ah uu u shaqeeyo si hufan.
Sony sidoo kale waxay soo saartay madax cusub
Haddii amarada cusub aysan ahayn midka aad jeceshahay, waxaan wali haysanaa cod midab cusub oo loogu talagalay dhagaha dhagaha. Xaqiiqdii, waa qaabkii hore u jiray, oo hadda leh qorshe dahab oo u gooni ah. Wax kasta oo la jaan qaada naqshadda cusub ee DualShock 4 oo waliba leh muuqaallo macdan ah iyo iftiimin.
Sida laga soo xigtay Sony, telefishanka cusub ayaa qiimahoodu dhan yahay $ 99. Wax kasta oo dhici kara ama u beddeli kara in loo beddelo euro oo waa in la heli karaa laga bilaabo Noofembar 2019. Maskaxda ku hay in midabada mid la mid ah ay ku jiraan koontaroolaha sida maktabadda cusub.
Ma xiisaynaysaa qalabka cusub ee PS4?